﻿	Cob တွင်ပြောင်းဖူးကိုမည်မျှကြာကြာပြုတ်ရမည်နည်း - ချက်ပြုတ်နည်းများ
Philly ဒိန်ခဲကင်သို့ကျဆင်းလာ crock အိုး
မီးဖို၌နှေးကွေးချက်ပြုတ် Cornish ကြက်
ခရမ်းချဉ်သီး parmesan နဲ့မင်းဘာလုပ်လဲ
အဆိုပါ Cob အပေါ်လွယ်ကူသောပြုတ်ပြောင်းဖူး
အဆိုပါ Cob အပေါ်ပြောင်းဖူးပြုတ် အချိန်တိုအတွင်းအဓိကဖြစ်သောအရာသည်အမြဲနူးညံ့။ အရည်ရွှမ်း။ ချိုမြိန်သည်။ ၎င်းသည်သင်ပြုလုပ်ခြင်းအပေါ်အာရုံစူးစိုက်ရန်ခွင့်ပြုသည့်အရာဖြစ်သည် အရည်ရွှမ်းဟမ်ဘာဂါ ချစ်သူ အာလူးသုပ် အကောင်းဆုံးနွေရာသီမုန့်ညက်ဘို့!
ငါတို့အကြိုက်ဆုံးတွင်ပျော်မွေ့ရန်အပိုအနည်းငယ်ချက်ပြုတ်သည် လတ်ဆတ်သောပြောင်းဖူးသုပ် ဒါမှမဟုတ် Frito ပြောင်းဖူးသုပ် ။
ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်ရှိငှက်ပျောသီး pudding ကိတ်မုန့်
ပြောင်းဖူးသည်တစ်ကိုက်တည်းသောနွေရာသီ၏စံနမူနာဖြစ်သည်။ ချိုမြိန်ပြီး buttery စုံလင်သည် BBQ ကင်ကြက်သား အရည်ရွှမ်းရန် marinated ဝက်သားခုတ် ။
အဆိုပါ cob အပေါ်ပြုတ်ပြောင်းဖူးတဝက်ကျိုးပဲ့သို့မဟုတ်သုံးပုံနှစ်ပုံသို့ပင်တပြင်လုံးကို cobs သို့မဟုတ် cobs နှင့်အတူလုပ်နိုင်ပါတယ် (သင်နှင့်အတူအမှုတော်ကိုထမ်းဆောင်နေအခြားအခြားဟင်းလျာများပေါ်မူတည်။ ) နိုင်ပါတယ်။ အခွံများနှင့်ပိုးများကိုဖယ်ထုတ်ပြီးရေပွက်ပွက်ဆူနေသောရေထဲသို့အိုးကြီးတစ်လုံးယူလာပါ။
အပူနှင့်အဖုံးပိတ်ပါ။ ဒီအသားပြုတ်ပြောင်းဖူးစာရွက်သည်မီးဖိုပေါ်တွင်မိနစ် ၃၀ အထိနေနိုင်သည်။
ပြောင်းဖူးကိုညှစ်။ cobs များကိုနွေးသောအိုးထဲသို့ပြန်ထည့်ပါ။ ထောပတ်ထည့်ပါ (သို့မဟုတ်ပင် ကြက်သွန်ဖြူထောပတ် ) နှင့်အရသာမှဆားငရုတ်ကောင်း။ အဖုံးကိုနေရာချပြီးပြောင်းနှင့် cobs များကိုထောပတ်ဖြင့်ဖုံးအုပ်သည်အထိလွှင့်ပစ်ပါ။
သူတို့ကိုအိုးထဲကနေဖယ်ရှားပစ်ရန်လျှာတရံကိုသုံးပါ, သူတို့ကပူ, အရည်ရွှမ်းနှင့်အစေခံရန်အဆင်သင့်ပါပဲ!
များစွာသောအသားပြုတ်သောပြောင်းဖူးချက်ပြုတ်နည်းများကချက်ပြုတ်သည့်ရေတွင်နို့၊ ထောပတ်သို့မဟုတ်သကြားထည့်ရန်အကြံပြုသည်။ သင့်ရဲ့ပြောင်းဖူးလတ်ဆတ်သောချိုမြိန်ခြင်းနှင့်ရာသီအတွက်ဆိုပါကတကယ်တော့မလိုအပ်ပါ!
ရေအိုးကြီးတစ်လုံးဖြင့်စတင်ပါ။ ပြောင်းဖူးကိုထည့်သွင်းခြင်းမပြုမီဆူပွက်အောင်ပြုလုပ်ပါ။ မဟုတ်ရင်အိုးမဖြည့်ပါနဲ့, အ cobs အညီအမျှချက်ပြုတ်လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။
ပြောင်းဖူး၏ cobs ထည့်ပါ အပြည့်အဝအနာစိမ်းမှာ 1 မိနစ်ပြုတ်ရန်ခွင့်ပြုပါ ။ ထို့နောက် ရိုးရိုးအပူနှင့်အဖုံးကိုပိတ်ပါ အိုးနှင့်ပြောင်းကိုအခြား ၁၀ မိနစ်သို့မဟုတ်မိနစ် ၃၀ အထိချက်ပြုတ်နိုင်သည်။
ခရမ်းချဉ်သီး Avocado အသုပ် - လွယ်ကူစွာပြင်ဆင်နိုင်သည် (ဥယျာဉ်ခရမ်းချဉ်သီးများဖြင့်)
အီတလီခေါက်ဆွဲအသုပ် - လူတိုင်းအကြိုက်ဆုံးခေါက်ဆွဲသုပ်
ကုလားပဲအသုပ် - ဟင်းသီးဟင်းရွက်အသစ်များနှင့်အရသာပြည့်ဝသည်။
Creamy သခွားသီးသုပ် - စပျစ်သီးပြွတ်
အကောင်းဆုံးအာလူးသုပ်စာရွက် - မိသားစုအကြိုက်ဆုံး!
အဆိုပါ Cob အပေါ်ပြောင်းဖူးပြုတ်
ပြင်ဆင်ချိန်၅ မိနစ်များ ချက်ပြုတ်ချိန်တကျိပ်တပါး မိနစ်များ စုစုပေါင်းအချိန်၁၆ မိနစ်များ ဝန်ဆောင်မှု၄ စားသုံးခြင်း စာရေးသူHolly Nilsson အဆိုပါ cob အပေါ်ပြုတ်ပြောင်းဖူးမီးဖိုချောင်ထဲမှာကြီးစွာသောအချိန်ကုန်ဆုံးဖြစ်ပါသည်နှင့်အမြဲတမ်းညာဘက်ထွက်လာ! ပုံနှိပ်ပါ ပင်
▢နှစ် ဇွန်း ထောပတ် သို့မဟုတ်အရသာအတွက်
ပြောင်းဖူးမှကောက်နှင့်ပိုးဖယ်ရှားပါ။ ဆန္ဒရှိလျှင် cobs တစ်ဝက်ချိုး။
ရေပွက်ပွက်ဆူနေသောအခါ, ပြောင်းဖူးနှင့် 1 မိနစ်ပြုတ်။ အပူနှင့်အဖုံးပိတ်ပါ။
၁၀ မိနစ်သို့မဟုတ်မိနစ် ၃၀ အထိချန်ထားပါ။ ကောင်းစွာယိုစီး။
ကယ်လိုရီ128,Carbohydrates:၁၇ဆ,ပရိုတိန်း:၃ဆ,အဆီ:၇ဆ,အဆီဓာတ်၄ဆ,ကိုလက်စထရော:ဆယ့်ငါးမီလီဂရမ်,ဆိုဒီယမ်:63မီလီဂရမ်,ပိုတက်စီယမ်၂၄၃မီလီဂရမ်,ဖိုင်ဘာ:နှစ်ဆ,သကြား:၆ဆ,ဗီတာမင်အေ:3. 4. 5IU,ဗီတာမင်စီ:၆.၁မီလီဂရမ်,သံ:0.5မီလီဂရမ်
သော့ချက်စာလုံးအဆိုပါ Cob အပေါ်ပြောင်းဖူးပြုတ် သင်တန်းအရံဟင်း ချက်ပြုတ်ခဲ့သည်အမေရိကန်© SpendWithPennies.com ပါဝင်သည့်အကြောင်းအရာများနှင့်ဓာတ်ပုံများသည်မူပိုင်ခွင့်နှင့်ကာကွယ်ထားသည်။ ဤစာရွက်ကိုမျှဝေခြင်းကိုအားပေးပြီးတန်ဖိုးထားသည်။ မည်သည့်ဆိုရှယ်မီဒီယာကိုမဆိုချက်ချင်းကူးယူခြင်းနှင့် / သို့မဟုတ်ကူးယူခြင်းများကိုလုံးဝတားမြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်၏ဓာတ်ပုံအသုံးပြုမှုမူဝါဒကိုဒီမှာကြည့်ပါ ။